July 3, 2019 - Update New
အသက် ၁၁၉ နှစ်ပြည့်တော့မည့် ..ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး
July 3, 2019 Mg Naing 0
အသက် ၁၁၉ နှစ်ပြည့်တော့မည့် ..ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး အသက် ၁၁၉ နှစ်ပြည့်တော့မည့် ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁/ခဖဒ(နိုင်)၀၀၈၉၁၁ ကိုင်ဆောင်သော ရဝမ်လူမျိူး ဦးဆမ်ဘုံဒီး၏ အိမ်ထောင်စု၌ […]
အရေးကြီးသတင်း … Red Alert Warning !အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြပါ။
မြန်မာ ပြည်သူ အားလုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း အရေးကြီးသတင်း … Red Alert Warning !အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အခု အခြေအနေဟာ ရာသီတုပ်ကွေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ […]
နာမည်ကြီးနေ တဲ့ အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ) အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ မလေးရှားနိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ကောင်လေးက ထားသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး […]
အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေသူ သမီးငယ်​ကိုပါ ပစ်​​ပြေးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်​
အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေသူ သမီးငယ်​ကိုပါ ပစ်​​ပြေးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်​ သန်​လျင်​မြို့နယ်​၊ ပျဉ်​​ထောင်​​ကျောင်း​ကျေးရွာမှာ​နေထိုင်​တဲ့ မမိုးမိုး ​ခေါ် မတင်​မိုးလို့​အမည်​ရသူ အမျိုးသမီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်​လ ၂၇ ရက်​​နေ့​၊ ကြာသာပ​တေး မနက်​ ၅နာရီခွဲ ဝန်းကျင်​မှာ အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတဲ့ သမီးငယ်​​လေးရဲ့ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ Justice for Victoria ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖြစ်ပွားခဲတဲ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Wisdom Hill private မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ အသက်၃နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုကို အမှုမှန်ကိုပေါ်ပေါက်အောင် တရားမျှတစွာစစ်ဆေးပေးကြဖို့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေဟာ change.org ကနေတစ်ဆင့် လက်မှတ်ထိုးပြီးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ […]
အမေရိကန် မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရမည့် သာသနာ့ အမွေခံ ပွဲတော်ကြီး ကို ဦးစီးကာ ကျင်းပအောင်ပွဲခံယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ အမေရိကန် မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရမည့် သာသနာ့ အမွေခံ ပွဲတော်ကြီး ကို ဦးစီးကာ ကျင်းပအောင်ပွဲခံယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ ကြွရောက်ချီးမြှော်ကတော်မူကြသည့် နိုင်ငံစုံ ဒေသစုံ မှ […]
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခံ ကလေးပေါင်များစွာကို မြေမြုတ်ပေးပြီး ရာနဲ့ချီ အသက်ကယ်တင်ထားသူ
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခံ ကလေးပေါင်များစွာကို မြေမြုတ်ပေးပြီး ရာနဲ့ချီ အသက်ကယ်တင်ထားသူ ကမ္ဘာလောကကြီး တစ်ဖက်စောင်းနင်းမဖြစ်အောင် သဘာဝတရားကြီးက အမြဲပဲ့ကိုင်ပေးထားတယ်ဆိုတာအရမ်းမှန်တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာကို မည်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကမှ ထောက်ခံကြမည်မထင်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရလာခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို တာဝန်ယူလိုစိတ်၊ မိခင်စိတ်ကင်းမဲ့စွာ အမှိုက်တစလို လွယ်လွယ်နဲ့ ဖျက်ချနေတဲ့ မိခင်တွေရှိသလို ဒီလိုဖျက်ချခံလိုက်ရတဲ့ […]
မိခင်ကို မုဒိမ်းကျင့်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို သမီးဖြစ်သူမှ တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်
မိခင်ကို မုဒိမ်းကျင့်နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို သမီးဖြစ်သူမှ တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက် သက်ကြီး မုဒိမ်း တရားခံ နံရိုးနဲ့လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ July 3,2019 ထိုင်းတောင်ပိုင်း သရမ်ခရိုင်မှာ ၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို အိမ်သားတွေမရှိကြတဲ့အချိန် ရိုက်နှက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ […]
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနမပြုဘဲ ထာဝရပူဇော်ထားရှိမည်
ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်ရာ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရှိရုပ်ကလာပ်မှာ ထူးခြားနေသောကြောင့် မီးမသဂြိုဟ်ဘဲ ထာဝရကိုးကွယ်မည် ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနမပြုဘဲ ထာဝရပူဇော်ထားရှိမည် ပဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီးဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန မီးသဂြိုဟ်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ဘဲ ရုပ်တော်အတိုင်း ထာဝရပူဇော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဈာပနတော် […]
ခေတ်ကြီးက သမီးမွေးထားလို့ စိတ်မချရရင် သားမွေးထားလို့ရော စိတ်ချရပြီထင်လား….?
ခေတ်ကြီးက သမီးမွေးထားလို့ စိတ်မချရရင် သားမွေးထားလို့ရော စိတ်ချရပြီထင်လား….? “Justice for Victoria” စာတမ်းတွေနဲ့အတူ နေပြည်တော်က အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ သမီးငယ်လေး Victoria လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်စော်ကားခဲ့မှု့ အတွက် တရားမျှတမှုရှိရေး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ News […]